‘माधव नेपालको नाममा लाभ लिएका तरमाराहरूले ओलीसँग आत्मसमर्पण गरे’ – Nepal Press
माधव-झलनाथको शक्ति 'रियल ग्राउण्ड' मा देखिन्छ, अवसरवादीलाई हेरेर आँकलन नगरौं
२०७८ भदौ ३१ गते १८:१७
काठमाडौं । माधव नेपालले एमाले विभाजन गर्दा दुनियाँले चिनेका र पत्याएका दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरूले साथ छाडे । माधव नेपालसँग कि त पुरानो पुस्ताका र धेरैले बिर्सिसकेका नेताहरू एकाएक अग्रभागमा देखिएका छन्, कि त युवा विद्यार्थीहरूको खरो पंक्ति छ ।
दोस्रो पुस्ताले छाडेपछि निराश बनेका माधव नेपाललाई जुरुक्कै बोक्ने पुस्ताका एक लडाकु हुन् सुदेश पराजुली । फागुन २३ को फैसलापछि पहिलोपटक एमालेमा समानान्तर कमिटीको अभ्यास पनि पराजुलीले नै गरे ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका अध्यक्ष पराजुली यसअघि एमाले विभाजनअघि नै समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष थिए । माधव नेपाललाई तलबाट बल प्रदान गर्ने यही पुस्ता हो ।
पराजुलीमात्र होइन माधव नेपालनिकट युवाहरूको आक्रोशको निशाना अहिले अन्तिममा धोका दिएर एमालेमै बस्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूप्रति छ । उनीहरूले दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई तरमारा भन्न थालेका छन् ।
माधव नेपालको नाममा सत्ता र शक्तिको लाभ लिएको तरमारा वर्गले एमाले विभाजनमा साथ नदिए पनि आफूहरू माधव नेपालको पिलर बनेर उभिएको पराजुलीले बताए ।
प्रस्तुत छ, अनेरास्ववियूका अध्यक्ष तथा जुझारु युवा नेता पराजुलीसँगको कुराकानी नेपाल प्रेसको नेपाल टकमा :
–नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ। तपाईंहरूलाई खुसी पनि होला, चुनौती पनि त छ हैन ?
मुलभूतरूपमा पार्टी विभाजित हुनुले नेपाली जनतालाई खुसी दिँदैन । यसलाई चुनौतीकै रूपमा बुझ्नुपर्छ । जुन ढंगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित भयो, त्यसपछि एमालेको थप विभाजन भयो । यसबाट हामी दुःखित नै छौं ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच जुन ढंगले एकता भएको थियो, त्यसलाई जोगाउने काम शीर्ष तहमा बसेको नेतृत्वबाट हुने स्थिति हामीले देखेनौं । एउटा हस्ताक्षरकर्ता थप विभाजनको साक्षी बन्नुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई झन धराशायी बनाउने पात्रका रूपमा केपी शर्मा ओलीले भूमिका खेल्नुभयो ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकतापछि बनेको नेकपालाई जनताले अमुल्य मत दिए । झण्डै-झण्डै दुई तिहाई मतबाट जनताले अनुमोदन गरे ।
तर, केपी ओलीले कम्युनिष्ट पार्टीको विधि, पद्धतिजस्ता कुनै पनि कुरालाई मान्न स्थिति बनेन । उहाँले एकल ढंगले अगाडि बढ्ने, कम्युनिष्ट विचारलाई लत्याउने र कुल्चने गर्नुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजन, विभक्त गर्नेतिर लाग्नुभयो । विदेशी प्रभुसँग सल्लाह गरेर बालुवाटारबाट कम्युनिष्ट पार्टीलाई विभाजित गर्न लाग्नुभयो ।
त्यसरी हेर्दा हामीले चुनौती देखेका छौं । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थप अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीलाई फेरि गोलबन्द गर्नुपर्ने, वामपन्थी एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
–केपी ओलीले त तपाईंहरूलाई पार्टी नै बन्न सक्नुहुन्न भन्नु भएको छ । कटाक्षपूर्ण भाषामा ‘माधव नेपालको पिउसो’ पनि भनिएको छ। तपाईंहरू कसरी कम्युनिष्ट आन्दोलनको संरक्षण गर्न सक्नुहोला ?
केपी ओलीका यस्तै-यस्तै बोली व्यवहार र तौरतरिकाले नै आज कम्युनिष्ट आन्दोलन विघटन भयो । जतिखेर केपी पार्टी अध्यक्ष हुनुभयो, त्यसपछि कम्युनिष्ट आन्दोलन ओरालो लाग्यो । विभाजन र विसर्जनतिर लाग्यो । त्यसकारण केपी ओलीलाई एकचोटी म आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न आग्रह गर्छु ।
उहाँलाई म एकचोटी स्मरण गराउन चाहान्छु– जतिबेला डा. केशरजंग रायमाझीले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा दरवारमा बुझाइरहेका थिए, त्यतिखेर पुष्पलालको त्यो झिल्कोले नै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई थेग्यो र बचायो । आज केपी ओलीका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन विर्सजनको दिशामा पुग्यो । त्यसकारण हामी जस्तै व्यक्तिहरूले विद्रोह गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई उहाँको त्यो विर्सजन पथबाट बचाउनुपर्ने दायित्व आएको छ । उहाँले देखेका पिउसोहरू, उहाँले देखेका साना चिजहरूबाट नै वृहत्तर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने एउटा अठोट हामीले लिएका छौं ।
– तर, नयाँ पार्टीलाई स्थापित गर्न, जनअनुमोदित गराउन कठिन त कठिन छ नि ?
हामीले यसलाई नयाँ पार्टीका रूपमा बुझेका छैनौं । हामीले कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विद्रोह गरेका हौं । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विर्सजन गर्ने प्रयासको हामीले अन्त्य गरेका हौं । त्यसकारण यो नयाँ पार्टी, नयाँ संरचना होइन । हाम्रो विद्रोह पुरानै जगमा, जनताबाट अनुमोदित भएको विद्रोह हो ।
– तैपनि शक्तिको मापन त गर्नुपर्ला नि । अहिलेको विभाजन हेर्ने हो भने संघ र प्रदेशमा २० प्रतिशत भन्दा केही बढी मात्रै छ । तर, स्थानीय तहमा जाँदा त्यो घटेर १० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ । यसरी हेर्दा विभाजन कमजोर त भयो नि ?
केही तथ्यांकलाई देखाएर कसले के भनिरहेको छ, त्यतातिर मलाई त्यति प्रवाह छैन । जसले नेकपा एमालेभित्र ठूलो संघर्ष गरिरहेका थिए, ती व्यक्तिहरूले केपी ओलीका कारणले स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट पाउने अवस्था बनेन ।
महानगर, नगर, गाउँपालिकामा जुन मान्छे लोकप्रिय थियो, त्याग र समर्पण गरेको थियो, त्यस्ता मान्छेलाई पन्छाएर उहाँले गोजीका मान्छेलाई टिकट दिनुभयो, त्यो परिस्थितिमा केही फेरबदल भएको होला ।
जहाँ-जहाँ हामीले विद्रोह गरिरहेका छौं, त्यहाँ अत्यन्तै लोकप्रिय भएका, जनताका प्यारा मान्छेहरू हाम्रो विचार, हाम्रो विद्रोहसँग नजिक हुनुहुन्छ । उहाँहरूले दृढताका साथ पार्टीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ ।
–माधव नेपालको शक्ति त यतिमात्रै होइन । एमालेमै रहँदा पनि उहाँलाई करिब-करिब ४५ प्रतिशतको शक्ति भनिन्थ्यो । अहिले नयाँ पार्टी गठन गर्दा किन घट्यो ?
युद्धको मैदानमा जान आँट गर्नेहरू हेर्दा तपाईंले भनेको जस्तो पनि होला । तर, तपाईंले माधव नेपालको ‘रियल ग्राउन्ड’त हेर्नुभयो नि । माधव नेपालसँग भएको केही अवसरवादीहरू, माधव नेपालसँग भएका केही पदबाट लाभान्वित भएकाहरूको मूल्यांकनले हाम्रो मूल्यांकन हुन सक्दैन ।
माधव नेपाल-झलनाथ खनालको रियल ग्राउन्ड हेर्नुहुन्छ भने गाउँ-गाउँबाट उठेको, जनसंगठनबाट उठेको शक्ति हो । त्यसलाई मापन गर्नका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
माधव नेपालको जग भनेको गाउँ हो, वडा हो, जनसंगठनको आकार हो । त्यस्तै जिल्ला र प्रदेश कमिटीहरू हुन् । माधव नेपालसँग लागेर अवसर लिएकाहरूको अनुहार देखेर मूल्यांकन गर्ने र आँकलन गर्ने गर्नु हुँदैन ।
-संघर्षका बेला तपाईंले अवसरवादी भनेर संकेत गरेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले बलियो साथ दिनुभएको थियो । तर, निर्णायक बेलामा साथ दिएनन् । माधव नेपालले उहाँहरूलाई एकताबद्ध गर्न नसकेको हो ?
जतिखेर माधव नेपाल पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ, विधि पद्धतीले पार्टी चल्नुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको थियो, त्यतिबेला अहिले भागेका नेताहरूले पनि उचालिरहनु भयो । तर, वास्तविकतामा उहाँहरू माधव नेपालको त्यो विचार, मान्यतामा र दृढतामा उभिनुभएन । तर, देख्दा चाहिँ उहाँहरू लागेको जस्तो देखिने, जनता र मिडियाको बीचमा भ्रम छरिरहनु भएको थियो । अहिले, उहाँहरूको वास्तविक अनुहार उदांगिएको छ ।
–पहिले उहाँहरूले उचाल्नुभयो, अहिले तपाईंहरूले उचाल्नुभयो । माधव नेपाललाई बाध्य बनाएर विभाजन रोज्ने बनाउनु भयो है ?
हामीले उचालेको कसैलाई पनि छैन । हामी विचारका जगमा पार्टीहरू बन्नुपर्छ, विचारका जगमा पार्टीलाई अगाडि लैजानु पर्छ भनिरहेका छौं । तर, केही नेताहरू पदको लोभमा, अवसर हेरेर माधव नेपाललाई उचालिरहेका र माधव नेपालको वरिपरी घुमिरहेको हामीले देख्थ्यौं । ती मान्छेले नै हो माधव नेपालबाट बढी भन्दा बढी लाभ लिएको ।
धन्न माधव नेपाल आफ्नो दृढतामा उभिनुभयो । आफ्नो विद्रोहको विचार बोकेर उभिनुभयो । हामी उहाँलाई सलाम पनि व्यक्त गर्न चाहान्छौं । माधव नेपाललाई सकुनीको चालमा पार्ने काम केही व्यक्तिहरूले गरिरहेका थिए, धन्न माधव नेपालले त्यो विद्रोहको जग, कम्युनिष्ट आन्दोलनको त्यो समर्पणलाई बोकेर अगाडि बढ्नुभयो । पहिले यी अवसरवाद र यस्ता किसिमका सकुनी प्रवृत्तिहरू माधव नेपालले बेलैमा चिन्नु भएन, अहिले चिन्नुभयो । र, हामी नयाँ गतिका साथ अघि बढेका छौं ।
–दोस्रो पुस्ताले साथ नदिँदा तपाईं युवाहरूको अनुहार हेरेरै माधव नेपालले यो जोखिमको यात्रा गर्न तयार हुनुभएको भन्ने छ । उहाँलाई स्थापित गराउने गरी तपाईंहरूबाट साथ हुन्छ ?
दोस्रो पुस्ता भनेर उहाँहरूले जुन किसमको लाभ, अवसर लिनु सिर्जना गरिरहनु भएको थियो, उहाँहरूको वास्तविक अनुहार अब देखिँदै गएको छ ।
हाम्रो पार्टीभित्र पहिलो पुस्ता एउटा त्याग र समर्पणले बनेका पुस्ता हो । त्यो पुस्ताले त्याग, वलिदान पनि गरेको छ र निष्ठा पनि छ । तर, हामीले भनेको दोस्रो पुस्ता (जुन मिडियामा धेरै रमाउँछ) जस्तो अवसरवादी अर्को पुस्ता कम्युनिष्ट आन्दोलनमा छँदै छैन् । उहाँहरू यति चुर्लुम्म अवसरवादमा डुब्नु भएको छ कि व्यक्तिगत आकांक्षा अनुसार कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नु भएको छ । अझ अगाडि बढेर भन्नुपर्दा दोस्रो पुस्ता मुलतः भ्रष्टिकरणमा डुबेको पुस्ता हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
भोलि त्यो भ्रष्टीकरण तपाईंहरूमा नदेखिएला भन्ने आधार के ?
हामीले बुझ्नुपर्ने, रूपान्तरण हुनुपर्ने, सिक्नुपर्ने र ती कुराबाट विद्रोही हुनुपर्ने देख्छु मैले । मान्छे विग्रने र आफू कस्तो बन्ने भन्ने कुरा ऊ स्वयंले नै निर्धारण गर्ने कुरा हो । तर, अहिले हामीले भन्ने दोस्रो पुस्ता जति विलासी, सुविधाभोगी, अवसरवादी अरु कुनै पनि पुस्ता हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
र, हाम्रो पुस्ताको जुन कुरा छ-हाम्रो पुस्ता अलि एड्भान्स छ । अहिलेका पुस्ता त्यति धेरै अवसरवादी छैन । यो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बनाउने पुस्ताको त्याग, समर्पणनलाई बुझेर केही न केही नयाँ चिजले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने विचार छ हाम्रो पुस्तामा छ जस्तो लाग्छ ।
पहिलो कुरा यो गठबन्धन, राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुपर्छ । यो गठबन्धन राष्ट्रती सम्झौताको विपक्षमा उभियो भने रहन्छ । राष्ट्रियताको पक्षमा नबोल्ने, जनहितको काम नगर्ने, राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने हो भने त यो गठबन्धन कसरी जुट्छ त ? यो गठबन्धन बनेकै संविधान मिचेका कारणले हो । केपी ओलीले संविधान मिच्नुभयो । धर्मनिरपेक्षता समाप्त पार्न, संघीयता समाप्त पार्न लाग्नु भयो ।
हामी आज माधव नेपालतिर लाग्दै गर्दा न मन्त्री पाउने हो, न कुनै नियुक्ति पाउने हो । त्यसैले पनि हामी यसभित्र समर्पण देखिरहेका छौं । यसभित्र कम्युनिष्ट पार्टीलाई जोगाउने, कम्युनिष्ट पार्टीलाई फेरि पनि लोकप्रिय बनाउने, हामीले देखेको सपना ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली’ बनाउने, दुनियाँका अगाडि हाम्रो देशलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउने विचार बोक्ने, त्यो हिम्मत देखाउने हाम्रो पुस्ता हो जस्तो लाग्छ । त्यो किन भने, मेलै दोस्रो पुस्तालाई यतिधेरै लक्षित गरेर भनिरहँदा उहाँहरूको व्यवहारले त्यो कुराको पुष्ट्याँइ गरेको जस्तो लाग्छ । उहाँहरूले जुन ढंगको व्यवहार गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पाइला-पाइलामा अवसरवाद छ । पाइला-पाइलामा उहाँहरूको पद प्राप्तिको इच्छा छ ।
–उहाँहरूले एमाले ब्रान्ड त्याग्न सक्नु भएन । एमाले ब्रान्ड त्याग्दा चुनावमा पराजित भइन्छ भन्ने भय उहाँहरूमा छ भनिन्छ । निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्दा तपाईंहरूले पनि त्यो मोह नि त्यो मोह छोड्नु भएको थिएन । आयोगले त्यो मिल्दैन भनेपछि तपाईंहरूले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुभयो । त्यो ब्रान्ड छोडेपछि तपाईंहरूको शक्ति के हुन्छ ?
हामीले यो कुरामा बुझ्नुपर्छ- हामीले कुन ढंगले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने ? ब्रान्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने लोकप्रिय ब्रान्डलाई नयाँले तहसनहस बनाएको, पराजित गरेको, विस्थापित गरेको पनि देख्नुहुन्छ । हाम्रै नेपालमा हिजो बद्री मण्डलको पार्टीको वाहवाही थियो । हामी जतिखेर राजाका विरुद्ध आन्दोलन गर्थ्यौं- कमल थापाको पार्टी वाहवाही थियो ।
हाम्रा अग्रजहरूले पञ्चायतका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर कमल थापा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादु चन्द, राजेश्वर देवकोटा जस्ता मान्छेहरूको वाहवाही थियो । तर, ती ब्रान्डहरू आज कहाँ पुगे ? जनताको जसले काम गर्दैन, जनताको जसले हित गर्दैन, देश विकासको कुरा जसले गर्दैन, समुदायको हितको कुरा जसले गर्दैन ती ब्रान्डहरू त समाप्त भएै गएका छन् नि ।
नेकपा एमाले केपी ओलीले नेतृत्व गरेको विर्सजनवादको चंगुलभित्र फसिसक्यो । त्यसले नेपालको क्रान्ति, नेपालको समाजको रूपमान्तरण गर्न सक्ने मैले देख्दिनँ । यसबाट कम्युनिष्ट आन्दोलन अब अगाडि बढ्छ भन्ने हामीले सोच्नुहुँदैन ।
–राष्ट्रियताको सवालमा त तपाईंहरूतिर प्रश्न औंला उठेको छ । तपाईंहरू सहभागी सरकारले नै दार्चुलाको जयसिंह धामी प्रकरणमा सशक्त आवाज उठाउन सकेन भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?
गठबन्धन सरकारमा हुँदा पनि नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाउने र आवाज बुलन्द बनाउन पहिलो विद्यार्थी संगठन हामी नै हो । हामीलाई समात्नुपर्छ, बोल्न पाइदैन भनेर गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति समेत जारी गर्‍यो । हामी भन्न चाहान्छौं- हाम्रो राष्ट्रिया कहीँ दुख्यो भने हाम्रो जीवन, हाम्रो हृदय दुखेको ठान्छौं । अहिलेको गठबन्धनले राष्ट्रहितविपरीत, जनहितविपरीत काम गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा हामी छौं ।
एमसीसीबारे तपाईंको पार्टीको धारणा के हो ?
राष्ट्रघाती एमसीसी कुनै पनि हालतमा परित गर्नुहुँदैन । त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ । हाम्रो भूभाग, हाम्रो जमीन, हाम्रो जंगल, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि कुनै देशको गिद्धे नजर परेको छ भने त्यसविरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरू, सबै विद्यार्थी संगठनहरू जाग्नुपर्छ । उठ्नुपर्छ । हामीले पार्टीका नेताहरूलाई पनि भनेका छौं- यही किसिमले एमसीसी पारित गर्ने कोसिस भयो भने त्यसका विरुद्धमा सडक ठूलो जनलहर आउँछ । त्यस्तो किसिमका राष्ट्रघाती परियोजना हामी जनतालाई स्वीकार्य छैन ।
हाम्रो पुस्ताको जुन कुरा छ-हाम्रो पुस्ता अलि एड्भान्स छ । अहिलेका पुस्ता त्यति धेरै अवसरवादी छैन । यो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बनाउने पुस्ताको त्याग, समर्पणनलाई बुझेर केही न केही नयाँ चिजले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने विचार छ हाम्रो पुस्तामा छ जस्तो लाग्छ ।
–तपाईंले यसो भन्दै गर्दा सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी र प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। गठबन्धनमा यही विषयले संकट आउने अवस्था देखियो त ?
राष्ट्रहितविपरीत हाम्रो देशलाई अन्य देशको क्रिडास्थल बनाउने जुनसुकै गतिविधि अहिलेको नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाले गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौं । हाम्रो सरकारभन्दा हाम्रो देश प्यारो छ । अहिलेको सत्ताभन्दा देश प्यारो छ । अहिलेको सत्ताभन्दा जनताको भूमि प्यारो छ । हामी अपील गर्न चाहान्छौं र चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं- अहिलेको सरकारले त्यस्तो नगरोस् । यस्तो किसिमको गतिविधिले गठबन्धन टिक्दैन ।
–एमसीसीले यो गठबन्धन भत्काइदिन्छ भन्ने चर्चा बाहिर छ । यसको भविष्य चाहिँ के होला ?
–यो गठबन्धन चुनावसम्म रहेन भने त तपाईंहरूलाई निकै गाह्रो होला नि त ?
शेरबहादुर देउवाले सबै नराम्रो गर्नुभयो भने गठबन्धन रहिरहन्छ त ? केपी ओलीले संविधान विघटन गर्दा हामी विद्रोह गरेर अगाडि बढेका मान्छे हौं भने शेरबहादुर देउवाले गरेका गलत कामका पक्षमा हामी उभिन्छौं त ? हामी उभिदैनौं नि । अहिलेको पाँच दलको गठबन्धन भनेको विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध उभिन सक्ने हुनुपर्‍यो नि ।
–चुनावमा चाहिँ तपाईंहरू कसरी जानुहुन्छ ? माओवादी र समाजवादीहरूसँग मोर्चाबन्दी हुन्छ कि एकीकरण ?
एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावमा जान्छ । जनस्तरमा हाम्रा संगठन निर्माण गर्छौं । हामी जनतालाई भन्छौं- आज कम्युनिष्ट पार्टी किन विघटनको संघारमा पुग्यो ? हामी किन विद्रोहको ठाउँमा पुगेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्‍यौं भन्ने सन्दर्भलाई जनतामा बुझाउँछौं । केपी ओलीका कारण कम्युनिष्ट आन्दोलन बच्ने अवस्था देखिएन । केपी ओलीकै कारणले कम्युनिष्ट आन्दोलन विसर्जनको दिशामा अगाडि बढ्यो ।
–एक्लै जाँदा यत्रा ठूला पार्टीको कसरी समाना गर्नुहोला । एक्लै जाँदा तपाईंहरूको अस्तित्व रक्षा होला जस्तो लाग्छ ?
हेर्दै जाउँ न । हाम्रो संगठनको अधार हेर्दै छौं । हाम्रा कमिटीहरूका आधार हेर्दै छौं । हाम्रो पार्टी पुर्नगठित भइसकेपछि जम्मा दुई-तीन ठाउँमा कार्यक्रम गरेका छौं । त्यसको सन्देश के हो भने देशभरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बचाउनुपर्छ । केपी ओलीमुक्त कम्युनिष्ट आन्दोलन बनाउनुपर्छ । यो आवाजलाई हामी संगठित गर्छौं ।
–तपाईंको पार्टीमा देखाउने अनुहार पनि छैनन् । यसले त चुनावमा प्रभाव पार्ला नि ?
यो देशमा सबैभन्दा देखिने, चिनिने अनुहार भनेको राजेश हमाल, करिश्मा मानान्धर, रेखा थापा हो । उनीहरूले चुनाव जितेको देख्नुभएको छ? कुनै पनि चुनाव जनताप्रतिको समर्पण र विचारले नै हो । पार्टीको देशप्रतिको नीति, विचार, सिद्धान्तले चुनाव जित्ने हो ।
–त्यो मान्यतालाई बदल्न सक्नुहुन्छ ?
त्यो सकिन्छ भन्ने संविधानसभाको २०६४ को चुनाव हेरे हुन्छ । कुन आधारमा मान्छेहरू भोट हाल्छन् । कुन आधारमा मान्छेहरू आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन भन्ने कुरा त प्रष्टै छ नि ।
–यस्तो लहर एक्लै ल्याउने कि गठबन्धन बनाएर ल्याउने ?
हाम्रो अहिलेसम्मको सोच- हामी एकलरूपमा नै चुनावमा जान्छौं ।
–गठबन्धन नबनाइ चुनावमा जाने ?
सरकार बनाउन, केपी ओलीका निरंकुश गतिविधिमा ब्रेक लगाउन पो गठबन्धन भएको हो त ।
–माओवादी र उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग गठबन्धन पनि हुँदैन ?
कहीँ कतै तालमेल होला तर हामी मुलतः एकलरूपमा नै चुनावमा जान्छौं । हाम्रो मुल मान्यता भनेको एकलरूपमा नै हाम्रो पार्टीलाई स्थापित गर्ने हुन्छ ।
–तपाईंहरू एक्लै चुनावमा जानुभयो भने त आफ्नो पार्टी जिताउन त टाढाको कुरा एमाले केही मान्छेलाई पनि हराउन सक्नुहुन्न भन्ने टिप्पणी भइरहेका छन् नि ?
केही चटकी मान्छेले गरेका यस्ता टिप्पणीको हामी पछि लाग्दैनौं । केही चटकी मान्छेहरूले त्यस्तो भनिरहेका छन्, तर उनीहरूले कतिपटक हारेका छन्, आफ्नो अनुहार एकपटक ऐनमा हेर्नु भएको छ ? गठबन्धन बन्दा पनि हार्नु भएको छ । त्यसकारण यी चटकेहरूको दावीको कुनै अर्थ छैन । हामीले बोकेको मूल मान्यतालाई कसरी लैजान्छौं भन्ने कुराले धेरै निर्धारण गर्छ ।
प्रकाशित: २०७८ भदौ ३१ गते १८:१७